अखिल (छैठौं) केन्द्रिय उपाध्यक्ष देबेन्द्र कुँवर बिगत लामो समयदेखी बिद्यार्थी आन्दोलनमा सकृय हुनुहुन्छ । अखिल (छैठौं) रुपन्देही जिल्लाको अध्यक्ष , केन्द्र्य सदस्य , केन्द्र्य सचिब हुँदै अहिले केन्द्रिय उपाध्यक्ष रहनु भएका उहा संग स्वबियु निर्वाचन को बारेमा गरिएको संवाद :
- स्वबियु निर्वाचन हुन्छ ?
स्वबियु निर्वाचन जुनसुकै अवस्थामा पनि हुनुपर्दछ ।यदी निर्वाचन हुन सकेन भने नेपाली बिद्यार्थीको बलिदानी र सघर्ष बाट आएको सस्था प्रशासन र ठुला बिद्यार्थी संगठन मिलिमतोमा भस्ट्रचार को अखडा बन्ने र गुम्ने खतरा हुन्छ ।
- स्वबियु निर्वाचनको लागि अखिल (छैठौं) को तयारी कस्तो छ ?
स्वबियु निर्वाचनको मिती नजिकिदै जादा हाम्रो संगठनको तयारी तिब्र छ । माघ को १० गते सुर्खेतमा केन्दिय समितीको बैठक बसेर स्वबियु केन्द्रित कार्यक्रम घोषर्णा गरेका छौ । देशका सबैजसो क्याम्पसमा केन्द्र्य सद्स्यलाई नै खटाएका छौ । देशका धेरै जसो क्याम्पसमा सभापती घोषर्णा गरी सकेका छौ र अरु क्यम्पस नि छिट्टै गर्नेछौ ।
- अखिल (छैठौं) ले जित्ने आधार ?
हाम्रो संगठन राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रीयता गम्भिर संकटमा परेको बेला राष्ट्रियता को पक्षमा बिगत देखी लिएको नितीले बिद्यार्थीहरु हामी प्रती आक्र्शित छन । तसर्थ देसभक्त बिधार्थीले अखिल छैठौलाई नै जिताउनेछन ।
- तपाईंको संगठनले बिधार्थी आन्दोलनको एजेन्डा भन्दा पनी राजनीतिक एजेन्डा लाई किन प्राथमिकता दिनिहुन्छ ?
देशको सन्चालन शक्ती नै राजनीति हो । देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सम्म कुनै पनि उपल्ब्धी प्राप्त गर्न सकिदैन । ४६ सालको पञ्चायत बिरुद्ध को आन्दोलन तथा ६२ ६३ को जनअन्दोलन पनि बिधार्थीकै उपस्थिती उल्लेख्निय थियो तसर्थ हामीले बिधार्थी हक हित एजेन्डा संगै राजनितिक एजेन्डा पनि उठाउनेगरेका छौ ।
-स्वबियु निर्वाचनमा उमेरहद आवश्यकता थियो ?
जुनसुकै उमेरमा पनि बिद्यार्थी कलेजमा पढ्न पाउनुपर्दछ । कलेजमा पढ्ने सबै बिधार्थी को चुन्ने र चुन्न पाउने अधिकार स्वत: हुन्छ तसर्थ उमेरहदमा हाम्रो असहमती हो तर बिगत लामो समय देखी रोकिएको स्वबियु निर्वाचन यही कारण नरिकियोस भन्ने हाम्रो संगठनको धारणा हो ।